February 5, 2020 - Myitter
မြန်မာနိုင်ငံ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသံသယရှိသူ စောင့်ကြည့် လူနာလေးဦး ဓာတ်ခွဲခန်း အဖြေထွက်ပေါ်လာပြီ ….
စောင့်ကြည့်လူနာလေးဦးမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမရှိဘူးလို့ ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြေထွက် စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ လူနာလေးဦး မှာ ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်အရ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမတွေ့ရှိရဘူးလို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ သံသယ လူနာ နှစ်ဦးအပါအဝင် လူနာ ၁၀ ဦးမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ရှိ မရှိ သိရဖို့အတွက် နှာခေါင်းတို့ဖတ်နမူနာတွေကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ရဲ့ ရည်ညွှန်းဓာတ်ခွဲခန်းကို ပေးပို့ […]
တူရကီမှာ ပြင်းထန်တဲ့ ငလျင်လှုပ် အပြီး မြေထဲ ကနေ အနီရောင် ရေများစီးဆင်းလာတဲ့ (ရုပ်သံ)
တူရကီမှာ ပွငျးထနျတဲ့ ငလငျြလှုပျအပွီး မွထေဲကနေ သှေးခြောငျးရစေီးဆငျးလာ ဇနျနဝါရီလအတှငျးမှာ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ တူရကီငလငျြကွောငျ့ သဆေုံးသူ၄၀နီးပါးရှိခဲ့ပွီး ထိခိုကျဒဏျရာရရှိသူ ၁၆၀၀ကြျောရှိတယျလို့ သိရပါတယျ အစိုးရတာဝနျရှိသူတှအေဆိုအရ ထိခိုကျဒဏျရာရရှိသူတှကေို အရေးပျေါကုသပေးလကျြရှိပွီး ငလငျြကွောငျ့ နအေိမျပကျြဆီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတှကေိုလညျး ပွနျလညျတညျဆောကျပေးမယျလို့ သိရပါတယျ။ ငလငျြလှုပျပွီးနောကျမှာ နောကျဆကျတှဲ ငလငျြပေါငျး အကွိမျ၇၀၀ကြျောလှုပျခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒီထကျပိုပွီး ထူးဆနျးကွောကျဖို့ကောငျးတာကတော့ […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် လူနာတွေကို ဆေးကုပေးနေတဲ့ သူနာပြု မိခင်ကို လာတွေ့တဲ့ သမီးလေးကို အနားကပ်မရလို့လေထဲမှာ ပွေ့ဖက်ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ် ရုပ်သံလေးပါ။
လူနာတှကေို ဆေးကုပေးနတေဲ့ သူနာပွု မိခငျကို လာတှတေဲ့ သမီးလေး တရုတျနိုငျငံ Henan ပွညျနယျ ဆေးရုံမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျပိုးကူးစကျခံနရေတဲ့ လူနာတှကေို ဆေးကုပေးနတေဲ့ သူနာပွု မိခငျကို လာတှတေဲ့ သမီးလေးကို အနားကပျမရလို့လထေဲမှာ ပှဖေ့ကျခဲ့ရတဲ့ ဖွဈရပျ ရုပျသံလေးပါ။ ကွညျ့ရှူသူတိုငျး မကျြရညျ မဆညျိနိုငျဖွဈခဲ့ရတဲ့ ရုပျသံလေးပါ […]
လပွတ္တာမြို့နယ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သံသယရှီလူနာ အမျိုးသမီး ၁ ဦးတွေ့ရှိ …
Zawgyi လပွတ္တာမြို့နယ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သံသယရှီလူနာအမျိုးသမီး ၁ ဦးတွေ့ရှိ Wednesday , February5, 2020 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာမြို့နယ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သံသယလူနာ ၁ ဦးတွေ့ရှိသောကြောင့် ကုတင် ၂၀၀ ဆေးရုံတွင် စောင့်ကြည့်နေရကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါသံသယလူနာမှာ ကချင်ပြည်နယ်မှ လပွတ္တာမြို့နယ်သို့ရောက်ရှိလာကာ ဖျားနားမှုလက္ခဏာ […]
” သံပရာသီး စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးနည်း နှင့် သီးစေချင်သည့် အချိန်မှာ သီးအောင် ပြုလုပ်နည်း ”
သံပရာသီး စနစ်တကျစိုက်ပျိုးနည်း နှင့် သီးစေချင်သည့် အချိန်မှာ သီးအောင် ပြုလုပ်နည်း သံပုရာသီးကို ကိုယ်သီးစေချင်တဲ့ အချိန်မှာ သီးဖို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ မိမိ အတွေ့အကြုံ အပေါ်အခြေခံပြီး တင်ပြပါ့မယ်။ အခုပုံထဲက အပင်က ယိုးဒယား အစေ့မဲ့ သံပုရာပင်ပါ။ အသက်အားဖြင့် ၂ နှစ်ခန့်ရှိပါပြီ။ ၂၀၁၅ […]
၇ တန်း ကျောင်းသူ(၃)ဦးကို တည်းခိုခန်းသို့ အလှည့်ကျခေါ်ယူပြီး မုဒိန်း ကျင့်ခဲ့တဲ့ ဗေဒင်ဆရာ
ဒီမုဒိန်းမှုကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဖတ်ပြီးရင် ဘယ်လိုပြောချင်လဲ မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့တွင် ဗေဒင်ဆရာဆိုသူက ၇ တန်း ကျောင်းသူ(၃)ဦးကို တည်းခိုခန်းသို့ အလှည့်ကျခေါ်ယူပြီး မုဒိန်း ကျင့်မှုဖြစ်ပွား ရောင်းဒေါင်းကျေးရွာ အရှေ့ပိုင်းမှာနေတဲ့ အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ်ရှိသီဟအောင် ဆိုသူ ဗေဒင်ဆရာက သူနဲ့ရည်းစားဖြစ်နေတဲ့ အပျိုကြီး ဒေါ်အေးမြင့် (၃၈)နှစ်ကို ကံနိမ့်နေလို့ ယတြာချေရမယ်လို့ပြောတယ် […]
”ပုဂံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော တရုတ်ခရီးသွား ဘုရားကုန်း ပေါ်က ကဘီယာတစ်ဖာ” ကိစ္စ ရုပ်သံ ….
– ၁.၂.၂၀၂၀ – ရက် ညနေ ၅နာရီအချိန်ခန့်ပုဂံမြို့ဟောင်း စူဠာမဏိဘုရား တောင်ဘက် ရှေ့ဟောင်းအုတ်ကုန်းဖြစ်သည့်အိုးခြမ်းပဲ့ ကုန်းတွင် တရုတ်ခရီးသွားဧည့်သည်မှ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ကားဖြင့်ရောက်ရှိလာရာ ထိုအုတ်ကုန်းပေါ်ထိ မောင်းတက်လာပြီး သည်နှင့် အရက်ဘီယာတစ်ဖာ.နှင့် သောက်မည်ပြုစဉ်ထိုအုတ်ကုန်းပေါ် တွင် ရှိသော ပုဂံဒေသခံ ဧည့်လမ်းညွန် နှစ်ဦး မှ ဒီ ရှေ့ဟောင်းအုတ်ကုန်းပေါ် […]
” ညီညီအောင် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကားတိုက်လို့ဆုံးပြီ ”မြန်မာပြည်က သူ့အဖေနဲ့အမေကို ဆက်သွယ်တာမရလို့ပါ …..
ညီညီအောင် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကားတိုက်လို့ဆုံးပြီး။ မြန်မာပြည်က သူ့အဖေနဲ့အမေကိုဆက်သွယ်တာမရလို့ပါ။ မြန်မာပြည် ဘားအံ_တောင်ကလေးမှာနေတယ်လိုပြောတယ်။ှသူ့ဖေကရဲဘော် တမ(၂၂)ကလို့ပြောတယ်။ သူ့အဖေအမေနဲ့ ညီမတို့ရဲ့ဓါတ်ပုံပါ။ ဝိုင်းပြီးရှယ်ပေးကြပါ။ ဆက်သွယ်ဖုန်းနံပတ်_09_0091_7271 Kyaw Kaung unicode version ညီညီအောငျ ထိုငျးနိုငျငံမှာ ကားတိုကျလို့ဆုံးပွီး။ မွနျမာပွညျက သူ့အဖနေဲ့အမကေိုဆကျသှယျတာမရလို့ပါ။ မွနျမာပွညျ ဘားအံ_တောငျကလေးမှာနတေယျလိုပွောတယျ။ှသူ့ဖကေရဲဘျော […]
ကြာကန် (လှည်းကူး) သုံးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု ရက်လည် ဖိတ်စာ
ကြာကန် (လှည်းကူး) သုံးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု ရက်လည် ဖိတ်စာ Hlegu_News_Update_5_2_2020 – ကြာကန်ရွာ (လှည်းကူး) သုံးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုမှ တရားခံတစ်ဦးကို ၄.၂.၂၀၂၀ နံက် ၄ နာရီတွင် ဖမ်းဆီးရမိ။ – ကျန် တရားခံများကို ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရ […]